အခုအသစ်ပေါ်လာတဲ့ မြန်မာပုဂ္ဂလိကပိုင်လေကြောင်းလိုင်းအသစ်ဖြစ်တဲ့ Golden Myanmar Airway (GMA) အကြောင်းလေးပြောချင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရသစ်ရဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်း၊ ချစားမှုကင်းစင်ခြင်း၊ Clean Governance အစိုးရဖြစ်ရမယ်လို့ သမ္မတကြီးက တစ်ကြော်ကြော်နဲ့အော် နေသလောက် ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ သမ္မတကြီးမျက်နှာ အိုးမဲ သုတ်နေသလား မှတ်ရတယ်။
This entry was posted in Uncategorized and tagged ဦးခင်မောင်အေး, CB Bank, DCA, GMA, GMA Air Line on November 22, 2013 by koshwehtoo.
← ရှုပ်ထွေးသော၊ ကောက်ကျစ်သော၊ ယုတ်မာသော၊ လူမဆန်သော ဦးပိုင်ဘယ်လဲ? ဘာတွေလုပ်နေလဲ? ဘယ်သူတွေအတွက်လဲ? →